ExpertOption အပေါ်ပျမ်းမျှလိုင်း Moving | ဖွင့်လှစ်အကောင့်လမ်းညွှန် - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ExpertOption2အကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုတစ်သရုပ်ပြအကောင့်များနှင့်အမှန်တကယ်အကောင့်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါသရုပ်ပြအကောင့်နှင့်အတူ, သင်သည်မည်သည့်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားကြဖို့မလိုအပ်ပါတယ်။ စတင်ရန်, ဒီမှာနှိပ်ပါနှင့်သင်ချက်ချင်းကုန်သွယ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ ExpertOption platform ပေါ်တွင်ကုန်သွယ်မှုရန်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားနည်းပညာပိုင်းညွှန်ပြချက်အသုံးပြုခြင်း
သင့်ရဲ့ ExpertOption ကုန်သွယ်အကောင့်ရတဲ့ဖို့ကိုလမ်းညွှန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးအတည်ပြု
ExpertOption ပြီးနောက်သင် upload တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်:
အောင်မြင်သောကုန်သည်များကူးယူခြင်းဖြင့် ExpertOption အပေါ်အမြတ် Making
အဆိုပါသရုပ်ပြအကောင့်သင် ExpertOption ပလက်ဖောင်းမောင်းစမ်းသပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေမယ့်သင်တို့ကိုကို virtual ငွေသားနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကတည်းက, သင်သည်သင်၏ဝင်ငွေရရှိမှုရုပ်သိမ်းပေးရန်လို့မရပါဘူး။ တကယ့်အကောင့်ဖွင့်လှစ်သင်အမြတ်အစွန်းစေနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုဆုတ်ခွာဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တကယ့်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
ပေါ်လာတဲ့ pop-up window ကိုတွင်, သင့်မှတ်ပုံတင်ရေးအသေးစိတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အီးမေးလ်, Facebook က, သို့မဟုတ် Google account တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ယင်းကိုလက်မခံစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို '' checkbox ကိုနှင့်ဘောပင်အကောင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော 'ခလုတ်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောင့်ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့အစစ်အမှန်အကောင့်ဖွင့်ထားကြလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ပို့ပေးအတည်ပြုချက် link ကို ExpertOption အပေါ်အီးမေးလ်သင်ပေးထားသောလိပ်စာနှင့်ကလစ် နှိပ်. သွားကကိုသက်ဝင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အကောင့်ယခုတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကတကယ်အစစ်အမှန်ငွေနှင့်ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်င်ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်မတိုင်မီအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နှစ်ခုထက်ပိုသောခြေလှမ်းများရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားခြေလှမ်းများသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင် Option ကိုကုန်သည်ဝိသေသလက္ခဏာအတည်ပြုခြင်းနှင့်, သင့်ရဲ့ပထမဆုံး ExpertOption သိုက်လုပ်နေပါတယ်။
ExpertOption ကုန်သွယ်မှုနှင့် platform ပေါ်တွင်အမြတ်အစွန်းစေရန်လွယ်ကူစေအများအပြားကိရိယာများနှင့်အညွှန်းကိန်းပေးပါသည်။ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာရွေ့လျားနေသည့်ပျှမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tool ကိုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့တူညီသောဦးတည်ချက်အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးမယ့်အစိမ်းရောင်လိုင်းအဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အချိန်တစ်ကာလအတွင်းကုန်သွယ်ခံရပိုင်ဆိုင်မှု၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းပြသထားတယ်။
အဆိုပါရွေ့လျားပျမ်းမျှအားနည်းလမ်းများစွာအတွက်နေရာလေးကိုအတွက်လာပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ငါ့ကိုငါအရောင်းအဝယ်ဖြစ်တယ်တိကျတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းစျေးနှုန်းကန့်သတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအယူအဆတခုပေးသည်။ ထိုအကန့်သတ်ဟုသိမှတ်လျက်ငါ့ကိုကုန်သွယ်မှု entry ကိုမပြုမီသည့်အခါအကောင်းတစ်သပိတ်နှုန်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒုတိယ, ရွေ့လျားနေသည့်ပျှမ်းမျှငါ့ကိုမစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်အချိန်တိကျတဲ့ငွေပမာဏကိုကျော်ရွေ့လျားခဲ့ပြီးဘယ်လိုအကြောင်းအကောင်းတစ်စိတ်ကူးပေးသည်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူအမြတ်အစွန်းအရောင်းအထဲသို့မဝင်ရဖို့အကောင်းဆုံးသောအဆကိုခန့်မှန်းဖို့စေသည်။
အဆိုပါကုန်သွယ် interface ကိုတွင်, သင့် screen ၏အပေါ်ဆုံးမှာအညွှန်းကိန်း '' icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ။ ဒါဟာညာဘက်ဘေးနားရှိပိုင်ဆိုင်မှုမှဖွင့်
pop-up screen ကိုကလစ်နှိပ်တွင်အသစ်အညွှန်းကိန်းအောက်၌ '' ပျမ်းမျှအားရွေ့လျားပေါ်မှာ။
သင်ကဖုံးလွှမ်းပျမ်းမျှကာလရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်သင့်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားညွှန်ပြချက်, အရောင်, အမျိုးအစားနှင့်အကျယ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤဥပမာကိုငါမဆိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
'' လျှောက်ထားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားလိုင်းသည်သင်၏ screen ပေါ်မှာပုံပေါ်ပါတယ်။
ငါတိကျတဲ့စျေးနှုန်းအမှတ်တစ်ဝှမ်းမှာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုညွှန်ပြချက်အောက်ကရွေ့လျားပျမ်းမျှအားလိုင်းဖြတ်တောက်မှုကိုသတိပြုမိလျှင်, ငါ, ငါ့သပိတ်စျေးနှုန်း (သို့မဟုတ်ဤထက်နိမ့်အရာတစ်ခုခု) အဖြစ်ဒီကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါအကြှနျုပျသ p '' button ကို click ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ငါစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်းများနှင့်စျေးနှုန်းကိုအောက်တွင်ဖြတ်ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားလိုင်းအချို့အချိန်များအတွက်ကြောင်းစျေးနှုန်းအထက်တွင်တည်းခို check လုပ်ထားယခင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိုပါက, ဒီမြင်ကွင်းသူ့ဟာသူပြန်လုပ်လိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖွယ်ရှိသည်။ ဒါဟာငါစျေးနှုန်းကိုငါ့ကုန်သွယ်မှုကုန်ဆုံးသည့်အချိန်အားဖြင့်ငါ၏အသပိတ်စျေးနှုန်းထက်မြင့်မားဆက်လက်ရှိနေရန်မျှော်လင့်ထားသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ရွေ့လျားပျမ်းမျှအားလိုင်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုညွှန်ပြချက်အထက်လျှော့ချနှင့်အချို့သောအချိန်များအတွက်ကအထက်ဖြစ်နေဆဲပါလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါနှိမ့်ချ button ကို click ပါလိမ့်မယ်။
ExpertOption သူတို့ရဲ့ပညာရေးအပိုင်းတွင်ရွေ့လျားနေသောပျမ်းမျှနှင့်အခြား tools တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကပေးပါသည်။
ယခင်လမ်းညွှန်မှာတော့ငါတို့သည်သင်တို့၏ ExpertOption အစစ်အမှန်ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ငါသည်သင်တို့ကိုအမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုနဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ရန်အတွက်လုပ်ဖို့လိုအပ်အရာတစျခုသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။
ဒါဟာလိုအပ်ချက် ExpertOption ကြောင့်စစ်မှန်စွာဝဘ်န်းကျင်ပိုက်ဆံရွှေ့ဖို့ကိုသူတို့အကောင့်ကို အသုံးပြု. ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်အဖြစ် platform ပေါ်တွင်ကုန်သွယ်မှုလိုလားသူတစ်ဦးအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးရဲ့အတည်ပြုခွင့်ပြုပါတယ်။ အကောင့်စိစစ်အတည်ပြုလည်းသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကူညီပေးသည်။ တစ်ဦးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူတစ်ဦးသင့်အကောင့်ကနေပိုက်ဆံထုတ်ယူဖို့ကြိုးစားပါတယ်တယ်ဆိုရင်သူတို့လိုအပ်သောစိစစ်အတည်ပြုအသေးစိတ်ကိုများကိုမဟုတ်လျှင်, ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင့်ရဲ့ကုန်သည် interface ကိုတွင်, ဘဏ္ဍာရေး, ပြီးတော့ဆုတ်ခွာအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် Confirm သတင်းအချက်အလက် button ကို click လုပ်ပါ။
(ရှေ့နှင့်နောက်ကျောနှစ်ခုလုံး) သင့် ID ကို၏ပုံများ
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံ ဗီဇာကတ်ကို သင်သည်သင်၏အရောင်းအဘို့အလိုလျှင်သုံးစွဲဖို့သွားနေမယ်ဆိုရင်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပြောင်းအလဲများကိုမှတပါးပေါ်တွင်နှိပ်ပါ '' ပြီးတော့တင်သွင်း
ExpertOption အကောင့်စိစစ်အတည်ပြု 1 ရက်3ယူပါလိမ့်မယ်။ သင့်အကောင့်မှအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ ExpertOption သင်တစ်ဦးအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ExpertOption ကိုထူးခြားစေသည့်အင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ social feature ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအောင်မြင်သောကုန်သည်များအားအချိန်နှင့်တပြေးညီကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်မှာကမ္ဘာတလွှားရှိအခြားကုန်သည်များ၏တည်နေရာမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်သင်သည် options များကုန်သွယ်မှုတွင်အသစ်ဖြစ်နေလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုမ ၀ ယ်ခင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသုတေသနပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမသွားလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီ feature သင်တို့ကိုလည်းအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်အောက်ပါပါတယ်ကုန်သည်များကဲ့သို့တူညီသောလမ်းထဲမှာရိုက်ထည့်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ထွက်ပေါက်အရောင်းစေသည်။ သူတို့ရဲ့အရောင်းအအမြတ်ဖြစ်စေလျက်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အရောင်းအမူလျှင်။ ဤတွင်ကိုလိုက်နာဖို့ခြေလှမ်းနေသောခေါင်းစဉ်:
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်တွင်, သင့်ကုန်သွယ် interface ကို၏ညာဘက်အခြမ်းမှာလူမှုရေး '' icon ကို click
ဤသည်, အွန်လိုင်းကုန်သည်အရေအတွက်ကပြသတဲ့ window ကိုဖွင့်လှစ်အပေးအယူဖွင့်လှစ်, သင်ကဲ့သို့တူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များနေသောကုန်သည်များက။ သင်တို့သည်လည်းအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ကုန်သွယ်ခံရအပေးအယူများနှင့်စုစုပေါင်းအသံအတိုးအကျယ်ဝင်ကုန်သည်အရေအတွက်ကရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤနည်းကိုသင်လုပ်နေတာအခွားအဘယျကုန်သည်များအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုတက် '' အနေအထားသို့မဟုတ်ဆင်း '' အနေအထားကိုထည့်သွင်းဖို့ရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။
Tags: ပျမ်းမျှလိုင်း Tableau Moving Add, ပျမ်းမျှ2လိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုပြောင်းရွှေ့, ပျမ်းမျှပြီးတော့ဗွီအိုအေလိုင်း Moving, ပျမ်းမျှလိုင်း Moving, ပျမ်းမျှလိုင်းဇယား Moving, Excel ကိုခုနှစ်တွင်ပျမ်းမျှလိုင်း Moving, R ကိုခုနှစ်တွင်ပျမ်းမျှလိုင်း Moving, ပျမ်းမျှလိုင်းပါဝါ Bi Moving, ပျမ်းမျှလိုင်း Tableau Moving, ပျမ်းမျှ Vs Trend လိုင်း Moving, လိုင်းတွင်ပျမ်းမျှ Moving, Tableau ပျမ်းမျှလိုင်း Moving, နှစ်ဦးကလိုင်း Moving ပျမ်းမျှ, အဘယ်အရာကိုပျမ်းမျှလိုင်းရွှေ့သည်